Sony jikọtara nkewa mkpanaka ya na igwefoto, TV na ọdịyo | Gam akporosis
Sony jikọtara nkewa mkpanaka ya na igwefoto, TV na ọdịyo
Sony Mobile ezigala ọghọm n'ọtụtụ ebeebe nkewa ndị ọzọ, dị ka igwefoto, TV na nkewa okwu, na-aga n'ihu ịkwụ ụgwọ ọtụtụ nde dollar. Agbanyeghị, nke ahụ nwere ike ịkwụsị n'oge adịghị anya, dịka Sony kwupụtara na ọ na - ejikọ ngalaba mkpanaka ya na igwefoto, igwe onyonyo na nkewa.
A ga-akpọ nkewa ọhụrụ 'Eletrọniki ngwaahịa na ngwọta' ọ kwesịrị ịpụta na mgbanwe nke teknụzụ n'etiti ngwaahịa n'ọdịnihu.
Fọdụ ndị mmadụ ekwupụtala ihe ịtụ n'anya na njikọ ahụ, ebe ha tụrụ anya na Sony ga-eresị ma ọ bụ mechie nkewa ekwentị ya. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, ụlọ ọrụ Japan nwere atụmatụ ndị ọzọ. Ugbu a nkewa ha bụ otu, “ịsọ mpi” dị n’etiti ha ekwesịghị ịdị ọzọ.
Companylọ ọrụ ahụ na-ekwu na ọ ga-aga n'ihu ịkpọsa nsonaazụ arụmọrụ maka ekwentị ya, ọbụlagodi na mkpebi ọhụrụ. The mobile nkewa na-eme ihe mara ezigbo mma. Akụkọ na-ekwu na ọ furu efu karịa ego ($ 480 nde) karịa nkewa egwu egwuregwu nwere uru ($ 317 nde) na nkeji nke abụọ nke 2018.
Sony ka nwere nnukwu olile anya maka nkewa mkpanaka ya, ọ bụrụ na anyị ka nwere ike ịkpọ ya nke ahụ. Ọ na-ahụ na eriri Xperia nwere ike ịmalite inwe ezigbo ọnụọgụ site na 2021, ozugbo enwere ike. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ na-eme atụmatụ ibelata mmefu ya na ọkara.
Sony Xperia 1: Akara ọhụrụ ọhụụ (Video)
Ngalaba ohuru nke Ngwa ahia Electronics na Solutions a ga-eme ka ọ bụrụ onye isi na Eprel 1. N’ụzọ dị ịtụnanya, mbugharị ahụ emetụtaghị ngwaahịa Sony n’ụzọ ọ bụla. Anyị ka ga-ahụ etu akụkọ a ga-esi metụta ahịa na etu akara ndị Japan si edozigharị ọhụụ ya nke egwuregwu ahụ, ebe ọ bụ na o doro anya karịa na ọ chọrọ ụzọ ọhụụ iji laghachite n'ihe ọ dị na mbụ na abughi onye ozo HTC.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sony jikọtara nkewa mkpanaka ya na igwefoto, TV na ọdịyo
New Google minigame maka mgbe ịnweghị njikọ
N’ikpeazụ anyị nwere ike iji Edison Mail gbochie adreesị email